Wax Ka Ogow Howlgallada Milliteri ee ka dhacay Soomaaliya Todobaadkii tagay. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Wax Ka Ogow Howlgallada Milliteri ee ka dhacay Soomaaliya Todobaadkii tagay.
On Aug 22, 2020 515 1
Todobaadkii aynu soo dhaafney wuxuu kamid ahaa todobaadyadii ugu howlgallada badnaa marka laga hadlayo howlgallada ay fuliyaan ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ee ay ku beegsanayaan Shisheeyaha wadanka kusoo duuley, Dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada.
Haddii aynu ku hormarno magaalada caasimadda ah ee Muqdisho oo ah fagaare adag oo ay isku hayaan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab iyo Shisheeyaha, waxaa sabtidii laso dhaafay lagu dilay xubin katirsan Sirdoonka Dowladda federaalka, kaas oo ku sugnaa degmada Hodan ee gobolka Banaadir.
Maalintii xigtay ee Axadda waxay Muqdisho marti gelisay howlgalkii ugu weynaa ee dhaca todobaadkii aynu soo dhaafnay, kaas oo ahaa weerar lagu daah furay camaliyad Nafhurnimo ah oo ay xoog ku galayaal katirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ku qaadeen hotelka Elite ee saaran xeebta Liido.
Weerar 8 saacadood oo xiriir socday ayaa ka dhacay gudaha hotelka, kaas oo dhexmaray ciidamada Inqimaasiyiinta iyo askarta Dowladda federaalka, waxaana khasaaraha guud ee ka dhashey weerarka uu noqday dhimashada 25 xubnood oo katirsan Dowladda federaalka iyo dhaawaca 37 kale.
Hotelka Elite ayaa ah hotellada aadka loo ilaaliyo amaankiisa, waxaana ku kalsoonaa guud ahaan hay’adaha shisheeyaha iyo masuuliyiinta Dowladda federaalka, maadaama uu saaranyahay xeebta, kana horreeyaan kontoroollo amni oo dhowr ah.
Sidaas oo ay tahay Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab waxay ku guuleystay iney ka gudubto caqabadaha amni, si toos ahna u gaarto hadafka ay beegsaneysay.
Shabeellaha Hoose, oo kamid ah gobollada saaran magaalada Muqdisho waxaa isna todobaadkii lasoo dhaafay ka dhacay silsilado weeraro ah oo kala duwan, kuwaas o beegsaday ciidamada Dowladda federaalka iyo askarta Shisheeyaha.
Horraantii isbuucaas, afar askari oo katirsan ciidamada Dowladda federaalka ayaa lagu dilay weerar kamiin ah oo ciidamo katirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ka galeen nawaaxiga deegaanka Warmaxan.
Marka laga soo tago askarta lagu dilay kamiinka, waxaa sidoo kale ku dhaawacmey labo askari oo katirsan ciidamada Dowladda federaalka, halka lagu gubay mooto sidoo kalena lagu soo furtay labo mooto oo kale.
Waxaa sidoo kale ciidamada jugta culus ee Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab madaafiic ku garaaceen saldhiga ciidamada Dowladda federaalka ee degmada Awdheegle, waxaana duqeyntaas ka dhashey khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed intuba.
Isla maalinkii Sabtida, ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab waxay ka hortageen labo isku day weerar oo ay soo qaadeen ciidamada Dowaldda federaalka, kuwaas oo ka dhacay duleedka magaalada Jannaale, waxaana gacanta lagu dhigay askari katirsan ciidamada Dowaldda federaalka iyadoo markii dambe la dilay.
Maalinkii Axadda ee xigay waxay ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab inta u dhexeysa Jannaale iyo Buufow ku qarxiyeen gaari gaashaman oo ay saarnaayeen ciidamo katirsan Shisheeyaha, halkaasna waxaa lagu dilay 9 askari oo shisheeyaha katirsan.
Maalintii Talaadada, 8 askari oo katirsan ciidamada Dowladda federaalka ayaa lagu dilay weeraro kamiin iyo toos isugu jiray oo ka dhacay Afgooye iyo duleedkeeda, waxayna Mujaahidiinta weeraradaas ku furteen 5 qori iyo booshashkooda.
Maalintii Arbacada, weerar ka dhacay duleedka degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose waxay Mujaahidiinta ku dileen afar askari, halka ay ku dhaawaceen 5 kale.
Isla maalintaas, waxay ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab weerar ku qaadeen ciidamada Shisheeyaha Uganda ee heysta magaalada Jannaale, waxaana weerarkaas ka dhashey khasaare kala duwan.
Maalintii xigtay ee Khamiista waxay ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab weerar ay ku qaadeen Jannaale ku beegsadeen ciidamada Dowladda federaalka, halkaasna waxaa ka dhashey khasaare isuga jira dhimasho iyo dhaawac.
Wilaayada Gedo, maalinnimadii Sabtida waxay ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab weerar ku qaadeen saldhiga ciidamada Itoobiya ee degmada Buurdhuubo, halkaasna waxaa ka dhacay dagaal culus oo khasaare kala duwan uu ka dhashey.
Maalintii xigtay ee Axadana waxaa Gedo ka dhacay weerarkii ugu saameynta badnaa ee todobaadkii aynu soo dhaafney, kaas oo ahaa qarax lagula beegsaday kolonyo uu la socday wasiirka Waxbarashada ee Dowladda Federaalka Cabdullaahi Goodax Barre.
Kolonyada oo ku socdaalaysay wadada xiriisa Doolow iyo Balad Xaawo ayaa waxaa qaraxa uga dhaawacmey labo xillibaan iyo sarkaal katirsan Sirdoonka Dowladda federaalka, halka waxyeello xoogan ay gaartay gaariga uu qaraxu beegsaday.
Jimcihii aynu soo dhaafnay, waxaa sidoo kale magaalada Baardheere ee gobolka Gedo ka dhacay dagaal ay ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ku qaadeen askarta maamulka Jubbaland eek u sugan magaaladaas.
Jubbooyinka, Axaddii lasoo dhaafay ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab waxay weerar ku qaadeen askarta maamulka Jubbaland eek u sugan deegaanka Kulbiyow, waxaana halkaas dhimasho iyo dhaawac ku noqday tiro askar ah.
Jimcihiina, waxay ciidamada Mujaahidiinta weerareen ciidamada Kenyaatiga ee ku sugan deegaanka Cabdalla biroolle ee duleedka Kismaayo, tiro askar Kenyaati ah ayaana dhimasho iyo dhaawac noqday.
Wilaayada Baay iyo Bakool, waxaa ka dhacay mid kamid ah weeraradii guu weynaa ee todobaadkii lasoo dhaafay fuliyeen ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab, waxayna Mujaahidiintu weerareen deegaanka Goof Guduud buurrey, iyadoo weerarka lagu daahfuray camaliyad Nafhurnimo.
8 askari oo uu ku jiro gudoomiyihiin deegaanka Isxaaq Cali iyo taliyihii Booliiska Xasan Bakar ayaa lagu dilay weerarka, iyadoo lagu furtay saanado hub ah oo kala duwan.
Arbacadii aynu soo dhaafnana ciidamada Mujaahidiinta waxay si buuxda ula wareegeen deegaanka, kadib markii ay isaga carareen ciidamada maamulka Koonfur galbeed, iyagoo ka baqaya in lagu soo qaado weeraro culus.
Wilaayada Shabeellaha Dhexe, Talaadadii lasoo dhaafay waxaa magaalada Jowhar gudaheeda lagu dilay wasiir iyo xillibaan katirsan maamulka Hir Shabeelle, kaas oo lagu magacaabo Cabdil Qaadir Karaani, wuxuuna ahaa wasiirka beeraha ee maamulka Hir Shabeelle.
Gobolka Hiiraan, qarax ka dhacay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolkaas ayaa lagu burburiyay gaari cabdi bile ah, iyadoona dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen 5 askrai oo katirsan ciidamada maamulka Hir Shabeelle.
Isla weera toos ah oo ka dhacay bar kontorool oo ku taalla Baladweyne waxay ciidamada Mujaahidiinta Al-Shabaab ku dileen tiro askar ah.
Todobaadkii lasoo dhaafay wuxuu markale banaanka soo dhigay sida Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ay gacanta ugu heyso qaraarka dagaalka iyo weerarada ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyo gobollada kale ee ay ku suganyihiin Shisheeyaha iyo Dowladda federaalka.
Dowladda federaalka ee ay Shisheeyaha ka dhiseen wadanka ayaa dareemeysa xaalad adag oo dhanka amniga ah, waxaana dhalanteed isku bedeley qorshayaashii amniga ee ay ku dhawaaqeen, sida ay aaminsanyihiin khubarada iyo Siyaasiyiinta ka faallooda dagaalka ka soconaya Soomaaliya.
Abufatima says 10 months ago
Goortii cadaawaha lajaro waw jid boodaaye
Jirku iima noxo gaal ninay jaal yihiin abide
Jareerana kufaar uma galiyo ehel jaxiimaade
Joof kiyo markii laga jariyo jeen yihiyo duudka
Oo julubka laciqaabo iyo jiriyo moor yaanta
Jisadooda goortay helaan waw jid boodaaye
Oo waan u jeel qabay ridada jeerki laxuusay
Jihaad iyo kifaax baanu nahay jaahil yeel kiise
Juudaanka niman kaa qabee jaanku ka adeegay
Alaylehe jacayl baan u qabay jeerkan waxa gaaray
Jaliilow adaa mahadsanee jabi dhamaan tooda